Free Online wmv in MOV Converter
> Resource > Video > Top 5 Free Online wmv in Converter MOV
Waxaan leeyahay file wmv ah, waxaana doonayaa inaan wax ka bedel ku iMovie. Si kastaba ha ahaatee, iMovie waa wmv leheyn. Ma ii sheegi kartaa haddii ay jiraan waa hab si ay u xaliyaan dhibaatada?
Waxaan u maleynayaa in badan oo dadka isticmaala Mac ayaa la kulmay xaaladda noocan oo kale ah. Dhab ahaantii aad u baahan tahay oo dhan waa Converter video ah. Waxaa loogu badalo doonaa wmv si Mac video hooyo format, MOV. Dhawaan waxaan ka heli kartaa qaar badan oo converters video on suuqa. Qaar ka mid ah converters waa bilaash, halka qaar ka mid ah waxaa la bixiyaa. Maqaalkani waxa uu ku bari doonaa 5 sare ugu fiican oo lacag la'aan ah wmv online in MOV converters iyo mid desktop video Converter. Marka la barbar dhigo ka converters online, Converter desktop ku noqon karaan fiican uguna habboon xal u dhibaatadaada.
Benderconverter noqon doonaa talo ugu horeysay wmv a free online in Converter MOV. Its interface cad iyo si fiican u habaysan oo ka dhigaysa aad u ogaato sida loo sameeyo qaab beddelidda si fudud. Si loogu badalo wmv si online avi, kaliya aad u gali kartaa wmv aad file (in ka yar 100 MB), dooro QuickTime Video (.MOV) sida qaab wax soo saarka aad hoos yaala qaybta video ah. Ka dibna riix "Beddelaan" doorasho. Geedi socodka oo dhan waa mid fudud cajiib ah.
Sida Benderconverter, Converterfiles kale oo uu leeyahay interface si fiican u abaabulan. Iyo habka qaab beddelidda dhow yahay isla Benderconverter. Si kastaba ha ahaatee, farqiga u yahay in Converterfiles taageerada diinta 250 MB files. Iyo qaabka ay wax soo saarka waa ka sii badan intii Benderconverter. Marka laga reebo diinta video, audio, ay taageerto diinta document, bandhig, image iyo iwm Just isku day this wmv online si xor ah u Converter MOV.
Converter Cellsea waa sare wmv online si xor ah u Converter MOV iyo editor video. Sidoo kale waxa ay awood u gaare ringtone iyo editor sawir. Wixii coverting wmv si online MOV, aad wmv waa in ay noqdaan wax ka yar 25 MB. Oo waxaa kaliya taageeraa diinta video. Diinta Audio aan la taageeray.
ClipConverter waa wmv kale free online in Converter MOV. Waxaa badasha aad url warbaahinta galay MP4, 3GP, AVI iyo MOV xawaare sare. Laga soo bilaabo fursadaha diinta, aad dhigay kartaa qaybta video for diinta. By gujinaya ah "Contibue" button, waxaad si fudud u bilaabi kartaa qaab beddelidda.
Onlinevideoconverter badalo karaa in AVI, MP4, FLV, MOV, iyo iwm Waxay kuu ogolaanaysaa inaad badalo by galaya url warbaahinta ah ama si toos ah uploading file ah oo ka PC. Marka laga reebo in, waa Converter ah MP3, a Firefox dar-on, kordhin Chrome, iyo kordhinta Safari ah.
Wondershare Muuqaalada Video Converter ee diinta video, audio, iyo dvd. Uma baahnid in walaac size file wmv max ah. Tani wmv online in Converter MOV taageertaa covnerison Dufcaddii, kaas oo kaa caawinaysaa in aad badbaadin waqti badan. Sida DVD diinta, waxay kuu ogolaanaysaa inaad ka Apple, Android ama qalab kasta oo wax loogu badalo video inay DVD disc ah, si aad xusuustaada macaan oo dhan qaraabada iyo saaxiibada oo aad la wadaagi karto.